Apple WWDC vatsim-pianarana 2021/2022 Jereo ny vavahady fanavaozana ny fampiharana: Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
Apple WWDC vatsim-pianarana 2021/2022 Jereo ny Application Update Portal
Filed in Fanavaozana ny vatsim-pianarana by Editorial an'ny TMLT amin'ny 17 Jona 2021
Apple WWDC vatsim-pianarana: Ho fankasitrahana ny mpanjifany dia manolotra vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra i Apple. Ary koa, ity vatsim-pianarana ity dia hanampiana ireo mpianatra manana fanamby ara-bola hampandroso ny fianarany.
Ankoatr'izay, lasibatra ihany koa amin'ny fampitomboana ny fahaiza-manao sy ny fampandrosoana ny olombelona izany. Raha izany dia ilaina ny manandrana azy. Tsy misy ho very ianao raha manao izany. Na izany aza, hanana be dia be ianao raha toa ka voafidy.
Noho izany, raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba / ny toerana fampiharana, manohy mamaky fotsiny ity lahatsoratra ity. Hitari-dalana izany. Ary koa, hanome anao ny fampahalalana fototra ilainao rehetra izany.
Momba ny orinasa Apple Inc.
Alohan'ny hijerena ny Vatsim-pianarana Apple WWDC, Fanamarihana. Apple Inc. dia orinasa teknolojia iraisam-pirenena amerikana. Ary ny foibeny dia any Cupertino, Kalifornia. Ary koa, mamolavola, mamolavola ary mivarotra elektronika mpanjifa, rindrambaiko solosaina ary serivisy amin'ny Internet izy io.
Ankoatr'izay, Apple dia heverina ho iray amin'ireo orinasa teknolojia Big Four. Ary eo akaikin'i Amazon, Google, ary Microsoft io. An'i Apple Hardware Ny vokatra dia:
Ny iPhonesmartphone sy ny solosaina takelaka iPad.
Ankoatr'izay, ny solosaina Macpersonal sy ny iPod media portable.
Ary koa, ny Apple Watchsmartwatch sy ny haino aman-jery nomerika Apple TV.
Fanampin'izay, ny earbuds AirPodswireless ary ny mpandahateny mahay HomePod.
Ary koa, Apple manana be dia be koa rindrambaiko. Ny sasany amin'izany dia misy ny rafitra fiasan'ny macOS, iOS, iPadOS, watchOS, ary tvOS. Apple dia naorin'i Steve Jobs, Steve Wozniak, ary Ronald Wayne tamin'ny aprily 1976
Mba hahafahanao hangataka ny vatsim-pianarana Apple WWDC dia tsy maintsy:
Be 13 taona no ho miakatra. Ary koa, na ny taona farafahakeliny mitovy amin'ny faritany mifandraika amin'izany. Ohatra, 16 taona ao amin'ny Vondrona Eropeana.
Ary koa, misorata anarana maimaim-poana amin'i Apple amin'ny maha developer Apple anao. Na ho mpikambana ao amin'ny Programme Developer Apple manam-bola.
Ho fanampin'izany, misoratra anarana amin'ny andrim-pianarana akademika nahazo fankatoavana na mitovy amin'ny sekolim-pianarana ofisialy.
Ary koa, nahazo diplaoma tamin'ny lisea na mitovy amin'izany. Ary tokony ao anatin'ny 6 volana lasa izany ary miandry ny fanekena ny andrim-pianarana akademika nahazo fankatoavana.
Ankoatr'izay, ho mpikambana mavitrika amin'ny fikambanana STEM. Ary ekena ara-dalàna ho fikambanana tsy mitady tombombarotra.
Azafady mba mariho
Zava-dehibe ny manamarika ireto fampahalalana manaraka ireto alohan'ny fangatahana ny vatsim-pianarana Apple WWDC. Ankoatra ireo masonkarena fahazoana alalana etsy ambony dia tsy maintsy manaiky an'izany ianao Vatsim-pianarana WWDC Fepetra.
Raha tsy manaiky ianao dia aza mangataka. Amin'ny alàlan'ny fampiharana dia manaiky ianao fa voafatotry ny fepetra rehetra. Ary koa, ny fahazoana alàlana dia iharan'ny fanamarinana avy amin'i Apple. Ary tsy maintsy manaiky ianao hiara-miasa amin'i Apple hanome vaovao momba ny satan'ny fanabeazana sy ny maha-mpikambana anao.
Ankoatr'izay, ny mpiasa, ny mpianatra, ny mpiara-miasa, ny sampana, ny dokam-barotra sy ny maso misahana ny fampiroboroboana ny Apple Inc. Ary koa, ny mpianakavy akaiky sy / na ireo mipetraka ao amin'ny ankohonan'ny antoko toy izany dia tsy mahazo alalana.
Fepetra takiana amin'ny Vatsim-pianarana Apple WWDC
Ireto misy fepetra takiana aminao mba handefasana ny fangatahanao ho an'ny vatsim-pianarana Apple WWDC:
Tsy maintsy mameno ny saha takiana amin'ny fangatahana vatsim-pianarana ianao. Ary apetraho ireo rakitra sy antontan-taratasy ilaina rehetra alohan'ny handefasana.
Ary koa, raha mangataka amin'ny maha-mpianatra ianao dia mariho. Tsy maintsy manome PDF, PNG, na JPG amin'ny fandaharam-pianaranao amin'izao fotoana izao ianao. Na porofo hafa momba ny fisoratana anarana ankehitriny sy ny mombamomba ny fifandraisana ho an'ny diakona na ny talenanao.
Na izany aza, raha mangataka amin'ny maha mpikambana ao amin'ny fikambanana STEM na Apple Developer Academy ianao dia mariho. Tsy maintsy manome PDF, PNG, na JPG ny mombamomba anao ho mpikambana sy ny mombamomba ny mpifehy eo an-toerana ianao. Ny antontan-taratasy dia ekena amin'ny fiteny rehetra.
Ary koa, tsy maintsy mandefa kianja filalaovana Swift namboarina miaraka amin'ny Swift Playgrounds 2.2 na Xcode 10.1 ianao. Tsy hodinihina ireo tetikasa Xcode.
Fepetra fandefasana hafa ho an'ny Vatsim-pianarana Apple WWDC
Ankoatr'izay, ny kianja filalaovanao Swift dia tsy maintsy noforoninao ho olon-tokana. Na miorina amin'ny modely Swift Playgrounds izay novainao ho olona iray. Tsy hodinihina ny asan'ny vondrona.
Ary koa, ny kianja filalaovanao Swift dia tsy maintsy miasa tanteraka ary mihazakazaka amin'ny Swift Playgrounds 2.2 na Xcode 10.1. Na izany aza, raha mandeha amin'ny Swift Playgrounds 2.2 izy io dia tsy maintsy hamboarina mba hampisehoana tsara amin'ny maodelin'ny iPad Pro rehetra.
Ho fanampin'izany, hotsaraina ivelan'ny daholobe ny fandefasana. Noho izany, ny kianja filalaovanao Swift dia tsy tokony hiankina amin'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra. Ary ny loharanom-pahalalana ampiasaina amin'ny kianja filalaovanao Swift dia tokony hampidirina eo an-toerana ao amin'ny rakitra .zip anao.
Ary koa, tsy maintsy manome valin-kafatra nosoratanao ho an'ny fanontaniana rehetra takiana amin'ny endrika fangatahana ianao.
Ankoatr'izay, ny kianja filalaovana Swift dia tsy maintsy soratana amin'ny Swift Playgrounds 2.2 na amin'ny Xcode 10.1. Ary koa, ianao dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fehezan-dalàna amin'ny fifanarahana fahazoan-dàlana Swift Playgrounds Software na ny Xcode ary ny fifanarahana fahazoan-dàlana Apple SDKs.
Na izany aza, olona iray ihany no azonao apetraka ao amin'ny vatsim-pianarana Apple WWDC. Ary vatsim-pianarana iray ihany no homena isaky ny olona.
Ary koa, ny fandefasana vatsim-pianarana dia ekena amin'ny alàlan'ny endrika misy ao amin'ny ETO. Ny fandefasana dia tsy ekena amin'ny alàlan'ny fantsona hafa na rehefa nakatona ny fandefasana.
Ny fandefasana ny fangatahana ho an'ny vatsim-pianarana Apple WWDC dia tsaraina amin'ireto manaraka ireto:
Fahombiazana ara-teknika amin'ny kianja filalaovana Swift natolotra.
Ary koa, ny famoronana hevitra ao amin'ny kianja filalaovana Swift natolotra.
Fanampin'izay, atiny misy valiny an-tsoratra amin'ireo fanontaniana ao amin'ny takelaka fangatahana.
Ny fanapahan-kevitra rehetra raisin'ny mpitsara dia farany ary tsiambaratelo ny isa. Raha sendra misy fatorana dia homena ny mpangataka izay mbola tsy nahazo vatsim-pianarana. Raha tsy afaka manatrika ny mpandray iray dia afaka mifandray amin'ny mpangataka amin'ny isa ambony indrindra i Apple, amin'ny fahitan'i Apple irery.
Antony fanilihana Fampiharana ho an'ny vatsim-pianarana Apple WWDC
Ny fandefasana anao dia mety tsy ho raisina amin'ny vatsim-pianarana Apple WWDC raha tsy manaraka ny fepetra takiana amin'ny fahazoana alalana sy ny fandefasana. Ary koa, na raha mifanaraka amin'ny fepetra voalaza etsy ambany:
Ny toeram-pilalaovanao Swift dia tsy miasa mandritra ny fizotry ny fitsarana.
Ary koa, ny kianja filalaovana Swift izay omenao dia tsy nataonao. Na olona maromaro no nanangana azy. Araka izany dia tsy hodinihina ny asan'ny vondrona. Ary koa, ny asa plagiarized dia tsy hojerena ary mety hanala anao amin'ny vatsim-pianarana ho avy.
Ankoatr'izay, ny kianja filalaovanao Swift dia mitaky fisoratana anarana.
Fanampin'izay, ianao manara-maso sy / na mampiditra kaody an-tsokosoko ao amin'ny kianja filalaovanao Swift izay natao hamantarana na hanarahana ny fampiasana na ny mpitsara.
Fampahalalana lehibe momba ny vatsim-pianarana Apple WWDC
Ho fanampin'izany, Apple dia manana ny zony hanafoana ny fandefasana anao ankehitriny sy / na amin'ny ho avy. Na mitazona na manafoana ny vatsim-pianaranao sy / na trano onenananao amin'ny fotoana rehetra raha:
Manolotra taratasy fangatahana vatsim-pianarana mihoatra ny iray ianao. Noho izany, ny olona tsirairay dia avela fandefasana iray ihany.
Ary koa, ny ampahany amin'ny fandefasanao azy dia tsy marina, voarara, na noforonina.
Mandray anjara amin'ny fanorisorenana na fitondran-tena manimba hafa natokana ho an'ny Apple, mpiasan'ny Apple, mpangataka vatsim-pianarana hafa, na mpanatrika WWDC ianao.
Nomena vatsim-pianarana koa ianao ary aza mitaky ny tapakila sy trano fandraisam-bahinao amin'ny fe-potoana farany. Na ekeo izany fa aza manatrika WWDC isan'andro, raha tsy hoe nifanaraka tamin'i Apple.
Manaiky fanampiana amin'ny dia sy / na trano fandraisam-bahiny koa ianao, fa aza manamarina ny fizotran'ny dia sy / na ny trano fandraisam-bahiny nataon'i Apple. Ary aza mampahafantatra mialoha ny solontenan'ny Apple.
Ary koa, mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny omena anao ianao amin'ny daty hafa noho ny izay nalamin'i Apple nefa tsy nahazoana alalana avy tamin'i Apple.
Ianao, na mivantana na tsia, dia manatanteraka fihetsika rehetra natao hanelingelina ny programa vatsim-pianarana WWDC. Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny fanalam-baraka ny mpangataka vatsim-pianarana hafa hahazoana tombony tsara kokoa hahazoana vatsim-pianarana.
Ary koa, na fifandraisanao amin'ireo mpiasan'ny Apple hangataka fitsaboana tsara kokoa amin'ny fandefasana anao.
Tsy manatanteraka ireo fepetra sy fepetra ireo ianao (na ny fanoloranao).
Rohy fampiharana ho an'ny Vatsim-pianarana Apple WWDC
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny vatsim-pianarana Apple WWDC (loka tombony, fe-potoana farany sy ny hafa) KITIHO ETO.
Azafady mba alao antoka fa mahafeno ny fepetra takiana ianao alohan'ny hampiharana. Ary koa, ho an'ny mazava, azafady azonao atao ny mamaky ity lahatsoratra ity indray ary ny rohy momba ny vatsim-pianarana omena. Izany dia hanampy amin'ny fahalalana bebe kokoa ny fonosan'ny vatsim-pianarana. MIRARY ANAO HO TSARA VINTANA rehefa mampihatra ianao.
Ny University Federal Wukari dia nikatona noho ny krizy Tiv / Jukun
Kandidà voafantina fohy Karnataka Vidyasiri 2021/2022 Jereo ny lisitra feno
Septagus Consulting Nizeria voafetra Portal asa 2019 | www.septagusconsulting.com.
Ny saram-pianarana ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany UNILAG 2019/2020 ho an'ny mpianatra vaovao sy miverina.
Fanadihadiana mikraoba amin'ny mofo toast
Ampidiro izao amin'ny fandraisana mpiasa mitohy ao amin'ny Nachitech Oilfield Supply and Services Limited
Paikady fampianarana 10 momba ny fampianarana 2020 Fanavaozana ny fanamarinana
« JAMB UTME Fisoratana anarana 2021 Jereo ny fomba fividianana form sy fampiharana
Vatsim-pianarana ICCR ho an'ny mpianatra any Bangladesh 2021/2022 Fanavaozana ny vavahady »
Big Brother Naija 2021- Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba izany
Crossover Jobs Portal any Nizeria 2021 www.crossover.com
Asa Crossover any Nizeria 2021 Fepetra sy torolàlana momba ny fahazoan-dàlana
Vavaka Krismasy tsara indrindra holazaina amin'ny ankohonanao sy ny namanao mba hankalazana ny fanampiana
Orinasa mandoa vola 25 ambony indrindra 2021 - Lisitra voadinika tsara indrindra
Fampianarana asa eo akaikiko 2021 Jereo ny Requirement Eligibility farany
Fandraisana an-tanana FRSC fandraisana mpiasa 2021/2022
Karazana orinasa tsy tokony hiasanao amin'ny 2021
Fandraisana mpiasa FRSC fandraisana mpiasa.frsc.gov.ng 2021/2022 Application Portal
PhD Jobs any Nizeria 2021 Hizaha toerana ambony 10 ho an'ny mpihazona PhD
Asa any Lagos 2021/2022 Fampiharana sy fitakiana fahazoana alalana
Mampianatra asa any Nizeria 2021/2022 Tranon'asa momba ny asa an-tserasera
Portal fandraisana mpiasa FRSC sy vavahady fangatahana asa
Asa farany any Nizeria 2021 ho an'ireo nahazo diplaoma vao nahazo diplaoma tsara
Asa ao amin'ny Port Harcourt 2021/2022 Application Guide and Eligibility Requirements
NYSC Login Dashboard 2021 My NYSC Dashboard portal.nysc.org.ng
PTI Portal www.portal.pti.edu.ng Jereo ny fanavaozana ny fampiharana farany
Ahoana ny fomba hifidianana amin'ny BBNaija 2021 - ny fizotry ny fifidianana manontolo
UEI Student Portal 2021/2022 Vaovao farany. Misoratra anarana Kaonty Vaovao Eto
NDA Application Portal www.nda.edu.ng/#home/index Jereo ny fanavaozana farany